Serivisy sy maso i Sina Direct Line | Sunson
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo loharanom-piaramanidina marin-toerana any Hongkong sy ireo mpandefa lozisialy logistika manerantany any amin'ny firenena eropeana sy Etazonia, SunsonExpress Direct Line dia serivisy fitambarana sy paositra mifangaro ao amin'ny maody DDP (Declare Duty Paid). Mampiditra sidina mivantana avy any Hongkong mankany amin'ny vavahady itodiana isan'andro izahay ary mahazo ny fahazoan-dàlana amin'izany andro izany ihany. 100% ny fifehezana tanteraka ny entana amin'ny rivotra ary misy ny fandefasana kilometatra farany izay vahaolana ara-toekarena miaraka amin'ny fandefasana haingana izay natao indrindra ho an'ny fonosana e-varotra.
Fahatanterahan'ny fandefasana entana avy any Shina ka hatrany Brezila
Ny tsipika manokana an'i Sunson any Brezila dia manambatra ny loharanon'ny sidina Hong Kong kalitao sy ny serivisy paositra Breziliana, izay safidy lafo vidy ho an'i Brezila. Izy io dia mahomby amin'ny lafiny hafainganam-pandehan'ny fitaterana sy ny tahan'ny fandefasana, ary ny fonosana dia azo jerena mandritra ny fizotrany rehetra. Io no safidy tsara indrindra alefa any Brezila.
Kaodin'ny serivisy Fotoana itaterana
(andro fiasana) Entana ekena Tombam-bidy azo ampiharina
BR-EXPRESS 10 ~ 20 Fandefasana entana amin'ny ankapobeny
fandefasana rano sy solosaina Ny sanda nambara ＜ 50USD dia afaka amin'ny adidy sy ny VAT
Fahatanterahan'ny fandefasana entana avy any Shina mankany Etazonia
Mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny vahaolana fitaterana haingana sy mahomby avy any Shina mankany Etazonia, ny Sunson's US Line dia manambatra loharanom-pahalalana avo lenta any Shina Tanibe sy Hong Kong, ary koa ny serivisy fitaterana terminal DHL sy USPS ary serivisy fanadiovana haingana ny fadin-tseranana any Etazonia, izay manatsara be indrindra ny fotoam-pitaterana sy mampihena ny vidin'ny fitaterana, misy ny mombamomba ny fanarahan-dia aorian'ny fametrahana ny kaomandy, ary ny fizotran'ny dingana rehetra dia arahana. Afaka manaiky ny vokatra bateria sy ny vokatra misy ranoka izy io. Izy io dia mety amin'ny fitaterana vokatra sarobidy sy sarobidy amin'ny fotoana.
US-EXPRESS 9 ~ 14 Fandefasana entana amin'ny ankapobeny
fandefasana rano sy solosaina Ny sanda nambara ＜ 800USD dia tsy voaloa amin'ny adidy sy ny VAT
Fahatanterahan'ny fandefasana entana avy any Shina mankany Isiraely
Ny tsipika manokana an'i Sunson's Israel dia manambatra ireo loharano fiaramanidina Hong Kong avo lenta sy serivisy express any an-toerana any Israel. Milamina ny tsipika. Aorian'ny fandefasana dia omena avy hatrany ny laharana fanarahana. Ny fizotran'ny fizotrany rehetra dia azo antoka. Tsara ny vidiny ary avo ny tahan'ny fandefasana. Mba hanomezana anao traikefa fitaterana haingam-pandeha sy ara-toekarena, afaka manaiky vokatra bateria, vokatra misy ranoka, no safidinao tsara indrindra avy any Shina ka hatrany Israel.
Kaody fandefasana Fotoana itaterana
IL-EXPRESS 10 ~ 15 Fandefasana entana amin'ny ankapobeny
fandefasana rano sy solosaina Ny sanda nambara ＜ 75USD dia afaka amin'ny adidy sy ny VAT
Sina mankany Brezila mivantana